စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 13 of 30 | Frontier Myanmar
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြေးဆွဲနေသည့် နည်းပညာအခြေပြု အငှားယာဉ်များအား မျှတသည့် ယှဉ်ပြိုင်မှု ဖြစ်စေရန်အတွက် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်များနှင့် နည်းဥပဒေများ ရေးဆွဲသွားရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။ “မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းသုံး အငှားယာဉ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ ရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးလာပြီး မြန်မာ့ အငှားယာဉ်လောက တစ်ခေတ်ဆန်းစေရေးအတွက် လိုအပ်သော စည်းမျဉ်း၊.
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြရန် ဝန်ကြီးချုပ်နှစ်ဦးက Horasis Asia ဆွေးနွေးပွဲ၌ ဖိတ်ခေါ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ကာလကတ္တားမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သည့် Horasis Asia Meeting သို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမြင့်နိုင်တို့ တက်ရောက်ကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ကြရန် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲအား အနောက် ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင့် အိန္ဒိယ ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (ICC).
ကျေးလက်ရှိ လူ ငါးသောင်းခန့်အတွက် အလင်းရောင်ပေးနိုင်ပြီဟု စင်ကာပူဆိုလာကုမ္ပဏီ ကြေညာ
အရှေ့တောင်အာရှဒေသရှိ လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည့် အိမ်ထောင်စုများအတွက် Pay As You Go ငွေပေးချေမှုစနစ်ကို မိတ်ဆက်လိုက်သည့် စင်ကာပူကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံ ကျေးလက်ဒေသများရှိ အိမ်ထောင်စု ၁,၀၀၀ ကျော်အတွက် လျှပ်စစ်မီး ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟု ကြေညာလိုက်သည်။ ရေရှည်ငွေပေးချေမှု (လစဉ်ကျသလောက်ပေး၍ အပိုင်ရရှိခြင်း) ပုံစံဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများသို့ သင့်တင့်သော.
အာရှအမြန်ဆုံး 3G ကွန်ရက်များတွင် ပါဝင်နေဟု တယ်လီနောက ပြောကြား
အာရှအမြန်ဆုံး ကွန်ရက်များစာရင်းတွင် ၎င်း၏ 3G ကွန်ရက်လည်း ပါဝင်နေသည်ဟု စစ်တမ်းတစ်ခုကို အခြေခံပြီး တယ်လီနောက ပြောကြားလိုက်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အင်တာနက် အသုံးပြုသူများကို အခြေပြု၍ မိုဘိုင်းကွန်ရက် အခြေအနေများကို ထုတ်ပြန်ပေးသည့် အကြီးမားဆုံး ကွန်ရက်စံနှုန်းပြ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Open Signal ၏ ဆန်းစစ်မှုအရ ထိုသို့.